Not na-adịghị na-uru nke Global Ahịa | Martech Zone
Na nso nso a, agara m na-ere ahịa obodo. Ọ nwere azụmahịa dị egwu yana ebe ọ nwere ike ịmepụta, rụzie ma ree ngwaahịa niile site na ọnọdụ ya site na ncha. Facilitieslọ ọrụ ya bụ ụfọdụ n'ime ihe kacha mma na mba ahụ, onye ọ bụla nọ na ndị ọrụ ya nwere ezigbo aka, nwee ikike ma gbaara ya akwụkwọ.
Ihe ịma aka ya bụ na ahịa ọdịnala ya anaghị adọta okporo ụzọ ụkwụ ọ na-emebu. Ọbịbịa ya n'ịntanetị bụkarị broshuọ. Anyị ga-enyere ya aka ịhazi saịtị ya, nyere ya aka ịmepụta na ịkekọrịta akụkọ ndị ahịa ọ na-ahụ kwa ụbọchị, nyere ya aka ịkwalite ikike na ahụmịhe ọ mụtara, ma nyere ya aka ịgbasawanye iru ya karịa kilomita ole na ole gburugburu ọnọdụ ya.
Otu n’ime ihe ndị anyị tụlere bụ azụmaahịa. O lere m anya dị ka a ga - asị na ọ kwenyeghị m - ọ kwenyeghị na ihe pụrụ iche ya, nke izizi, ngwaahịa ejiri aka ya rụọ nwere ike ịsọ mpi n'ịntanetị yana ọtụtụ nnukwu saịtị ecommerce dị ebe ahụ. Ọ nweghị ike ịsọ mpi na mmefu ego nke ụlọ ọrụ ndị a.
Okwesighi ime ya. Ọ na-eme ụda maka obodo ndị ọ na-anaghị ekerịta. Ọ nwere ngwaahịa na-elekọta mmadụ nke ndị ahịa ga-achọ. Nke kachasị mma, ọ bụ nnukwu ahịa zuru ụwa ọnụ n’ebe ahụ. Otu ihe dị mfe dịka ike nke dollar anyị ịda mba megide mba na-asọmpi nwere ike ịre ahịa ya na mba ofesi. Ọ dịtụbeghị mgbe ọ na-azụ ahịa ahụ.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere ahịa na mpaghara na ị na-atụfu ahịa online… gaa online maka ahịa steeti! Ọ bụrụ na ị nọ na steeti, gaa mba. Ọ bụrụ na ị bụ onye obodo, ga mba! Nwere ike gakọrịta ụlọ ahịa gị n'ofe weebụ, gụnyere itinye ngwaahịa na eBay na Amazon. Na sistemụ ecommerce taa na-agukọta usoro siri ike nke ụtụ isi ahịa na mbupu ụgbọ mmiri na-enweghị mkpa ịbụ ọkachamara. Nwere ike ịga n'ihu na-abawanye okporo ụzọ ụkwụ na saịtị gị ma mepee ụwa gị!
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 42% nke ndị bi n'ụwa nwere ike ịntanetị (Jenụwarị 2015) na, dabere na usoro ndị a, a na-atụ anya na ekwentị ga-agbanye ntanetị ntanetị karịa 50% site na njedebe nke 2016. Ohere zuru ụwa ọnụ maka ndị na-ere ahịa ntanetị 2015.
Ndị a bụ ụfọdụ ihe ngosi si na infographic:
UK nwere mmefu kachasị elu kwa onye ọrụ ịntanetị, na nkezi nke $ 1364 na 2014
N'agbanyeghị na ị nwere nke atọ kachasị elu ịntanetị, Ihe na-erughị 1% nke ahịa mkpọsa India na-eme n'ịntanetị
Japan ka pụtara n’oge na-adịbeghị anya dị ka nnukwu onye ọkpụkpọ n'ahịa ecommerce nwere amụma ijeri $ 83 ga-emefu na 2015
Tags: ecommerce ahịammefu kwa onye ọrụ ịntanetịecommerce zuru ụwa ọnụahịa ụwaahịa ịntanetị Indiaahịa ndị ahịa Indiaahia mba ofesiịntanetị ojijiJapanahia japanụlọ nyochaecommerce uk